TSY FANAJANA IREO FEPETRA SAKANA : Tandindomin-doza amin’ny fihanaky ny Covid – 19 ny Firenena
Namela takaitra mafy tamina seha-pihariana maro teto amin’ny firenena ny fandalovan’ny valanaretina Covid- 19. 2 décembre 2021
Raha mitohy anefa izao tandrevaka ataontsika amin’ny tsy fanarahana an’ireo fepetra sakana ara-pahasalamana izao dia ahiana fa tena hirongatra izaitsizy eto Madagasikara indray ity valanaretina nampiondrika Firenena maro maneran-tany ity.
Manomboka mahazo vahana tsikelikely indray ankehitriny ny fihanak’ilay areti-mandoza entin’ny tsimokaretina “Coronavirus”. Raha ny tatitra ôfisialy navoakan’ny teo anivon’ny Minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka dia Faritra miisa efatra no tena voakasika hatreto, tafiditra ao anatin’izany ny Faritra Menabe, Matsiatra Ambony, Analamanga ary Vakinankaratra.
Ity farany no azo lazaina ho foiben-toerana misy ny valanaretina satria any an-toerana ny maro an’isa indrindra tamin’ireo vita fitiliana voamarina fa tratran’ny Covid – 19. Nambaran’ny mpitsabo iray izay nanaovana fanadihadiana fa tsy azo ihodivirana ny hidiran’i Madagasikara indray ao anatin’ny fihibohana raha mitohy ny tandrevaka amin’ny tsy fanarahana ireo fepetra ara-pahasalamana. Lasa fahazarana ho an’ny olom-pirenena sisa ny fandrenesana fa tokony hanao arovava-orona hatrany isaky ny mivoaka ny trano, manaja ny elanelana iray metatra eny amin’izay rehetra aleha ary ny fanasana tanana amin’ny rano sy savony. An-kavitsiana sisa ireo manaja izany ka tsy mahagaga raha tsy afa-bela fa iverimberenan’ny aretina tahaka izao hatrany isika. An-kilany, manampy trotraka ihany koa ny fitakiana amin’ny famohana ny sisintany izay tsy azo odian-tsy re, izay hita fa tena hisy fiantraikany goavana amin’io fivoaran’ny valanaretina Covid – 19 eto amintsika io.
Fanokafana sisintany, ahiana mafy i Nosy Be
Firenena maro maneran-tany no iverenan’ny Covid- 19 amin’izao fotoana izao. Akaiky antsika indrindra ireo Nosy manodidina toa ny Nosy La Reunion, ny nosy Maorisy ary ny ao Lafrantsa ihany koa. Ity farany izay hiditra ao anatin’ny andiany fahaefatra amin’ny fiatrehana ity valanaretina ity mihitsy, ary mitombo isan’andro ireo marary vaovao. An-kilany anefa nanao tohivakana ny fangatahana nataon’ireo mpandraharaha isan-tsokajiny ny amin’ny tokony hanokafana amin’izay ny sisintanin’i Madagasikara, ka hanokafana amin’izay ny habakabaka mba hahafahana mifandray amin’ireo Firenena avy any ivelany. Mbola tsy voafehy maneran-tany ny Covid – 19, saingy nanao fanamby ireo mpandraharaha nanao fangatahana.
Anisan’izany ny eo amin’ny sehatry ny fizahantany fa hanaraka amin’ny an-sakany sy an-davany ny fepetra ara-pahasalamana. Moa ve tena hahatandrina izany tokoa izy ireo, ka tena hahafehy ny tsy hiparitahan’ity valanaretina ity indray eto amintsika ? Azon’ny vahiny idirana ny etsy amin’ny seranam-piaramanidina Ivato izay azo antoka fa mety ho tena voara-maso izay mivoaka sy miditra. Azo idirana sy ivoahana tahaka izany ihany koa ny any Nosy Be ? Ny an’ity farany no tena ahiana mafy satria noho izy azo lazaina ho gaboraraka. Gaboraraka satria firifiry tamin’ ireo olo-meloka teto amin’ny Firenena no tafatsoaka an-tsokosoko any ivelany niainga tao Nosy Be ? Izany hoe, ahiana mafy tahaka izany ihany koa ny hahatafidiran’ireo olona (mety mitondra ny tsimokaretina) an-tsokosoko eto Madagasikara.
Ahiana ny hiverenana amin’ny fihibohana
Tato anatin’ny roa taona izay, anisan’ireo Firenena tsy afa-bela tamin’ny fandalovan’ny valanaretina “Covid – 19” i Madagasikara. Tsy maintsy nandray fepetra ny Fanjakana ka nampihiboka ny vahoaka malagasy nandritra ny fe-potoana voafetra. Tao anatin’izay anefa dia sehatra maro no nandringa ary tsy mbola tafarina tanteraka na dia efa ho roa taona taty aoriana aza. Amin’izao fotoana izao dia ahiana mafy indray ny mety hiverenana ao anatin’io fihibohana io raha toa mitohy izao tandrevaka amin’ny tsy fanarahana ny fepetra ara-pahasalamana izao.
Nanamafy izany ny mpitsabo iray nanaovana fanadihadiana izay nilaza fa raha mitohy ny fiakaran’io antontan’isa io satria minia tsy manaja izay fepetra napetraka ny olom-pirenena dia azo antoka ny mety hidirantsika indray ao anatin’ny fihibohana. Tahaka ireo fepetra efa noraisina teo aloha dia miankina feno amin’ny fahatongavan-tsain’ny tsirairay ny handraisana ny fanapahan-kevitra mba hahafahan’i Madagasikara mivoaka ao anatin’ny Covid – 19. Efa latsaka lalina ao anaty fahasahiranana tanteraka ny toekarem-pirenena. Betsaka ireo mizaka fatiantoka sy faharavana mihitsy, ka raha mbola mitohy ny gaboraraka sy ny tandrevaka dia vao mainka manokatra varavarana mankany amin’ny fahasahiranana lavitra mihoatra noho izao efa iainantsika izao isika.
Ilaina fanasaziana henjana
Tsy fanentanana intsony no ilain’ny vahoaka malagasy fa fanasaziana henjana. Izay tratra tsy manaraka ny fepetra napetraka na eny an-dalambe, na any amin’ny tranom-panjakana samihafa dia tokony hosaziana faran’izay henjana. Nanao fanambaràna ny teo anivon’ny Prefektioran’ny tanànan’Antananarivo fa hiverina indray manomboka izao ny fanaraha-maso sy ny fampiharana ny lalàna amin’izay tratra tsy manao arovava-orona eny an-dalambe. Nanomboka tamin’ny talata 23 novambra lasa teo no nivoahan’io didim-panjakana io. Ny tsikaritra anefa dia odian’ny maro an’isa tsy fantatra izany. Mbola betsaka ireo tsy manao arovava-orona na eny an-dalambe, na any am-piangonana, na amin’ireo toerana voatokana. An-kilany, efa tsy manaja ny fepetra ihany koa ny ankamaroan’ireo fiara fitateram-bahoaka ho an’ny eto an-drenivohitra. Voalaza fa tokony ho efatra isaky ny laharan’ny seza ny isan’ny mpandeha kanefa efa manomboka miverina ho dimy indray izany ankehitriny. Ny fiara fitateram-bahoaka anefa dia anisan’ireo sehatra tena manamora ny fiparitahan’ity valanaretina ity. Manoloana izany indrindra no tokony hanamafisana ny fanasaziana amin’izay rehetra tratra tsy manaraka ny fepetra ara-pahasalamana. Ny fanaovam-baksiny dia fanefitra sy fisorohana mafy izay anentanana ny tsirairay hatrany ny hanaovana izany.